Teori Pärm 6
Waxaad ku waddaa meel baabuurta la dhigto ama baarkin weyn ah waxaadna rabtaa inaad kusii socotid tooska hore. Gaariga ka imaanaya dhinaca midig tartiib ayuu u socdaa. Maxaad samaynaysaa?
Aniga ayaa hor maraya, maadaama uu ka imaanayo dhinaca midig
Waxaan daynayaa baabuurka kale inuu iga hor maro, maadaama uu ka imaanayo dhinaca midig
Aniga ayaa hor maraya maadaama aan ku wadayo tooska hore
Ma la oggolyahay in la istaago ama lagu baarkimo/ la dhigto meel boosteejo ah ama maxaddo bas?
Haa, haddii aanan xanibayn baska oo aan u istaagayo inaan saaro ama dejiyo alaab
Haa, haddii aanan xanibayn baska oo aan u istaagayo inaan dejiyo ama qaado rakaab
Maya, Manaba ma istaagi karo maxaddo bas
Haa, waan ku baakimi karaa ama dhigan karaa haddii aan dhex fadhiyayo gaariga
Middee ka mid ah calaamadahan ayaa tilmaamaysa inuu kaa horeeyo isgoys uu ka shaqaynayo xeerka midigtu?
Calaamadda waddada ee B
Calaamadda waddada ee C
Calaamadda waddada ee D
Calaamadda waddada ee A
Maxaa khuseeya isgoyskaan sawirka ka muuqda?
Waxaa khasab ah inaan u leexdo bidix
Waxaa khasab ah inaan u leexdo midig
Waxaan u leexan karaa labada dhinac ee midig iyo bidixba
Waxaad qorshaynaysaa inaad ku sii socotid tooska hore. Maxay tahay inaad diyaar u ahaatid xaaladaan oo kale?
In laga yaabo in darawalka iga horeeya inuu isbedelo oo kusii socdo tooska hore
In laga yaabo darawalka iga horeeya inuu mar dhaw istaago
In laga yaabo in darawalka haadka ama seedka bidix usoo bedesho haadkayga/seedkayga isgoyska dhexdiisa
Maxaa la isku dhahaa dhamaan masaafada laga bilaabo marka aad aragtid wax ku xanibi doona ilaa gaarigu ka joogsanayo ama ka istaagayo?
masaafada falcelinta (reaktionssträcka)
masaafada joogsiga (stoppsträcka)
masaafada biriigga (bromssträcka)
Maxay ku salaysan tahay kala qaybinta baabuurta cusub loo kala qaybiyo kooxo xagga bii'ada marka laga eego?
Inta haydrokaarboon iyo maadooyin kaloo sun ah ee uu gaarigu sii daayo
Inta kaarboondhayogsaydh uu gaarigu sii daayo
Gaariga culayskiisa guud
Gaariga shidaal cunitaankiisa
Warbixintee bay ka bixinaysaa calaamadda waddadu jidka tooska hore?
Inaan la oggolayn in la istaago ama la dhigto/lagu baakimo
Waddo soo dhamaanaysa oo dib kaliya loogu soo noqon karo
Inaan waddadaas loo oggolayn gaadiid
Sidee samaynaysaa xaaladdaan oo kale?
Hoonka yeerinayaa si aan u dareensiiyo qofka socotada ah inuu eyda iga hayo si aan u dhaafo
Xawaaraha kordhinayaa si aan dhakhso u dhaafo lugeeyaha iyo eyda leexashada ama goolada itaanan gaarin
Xawaarahaan dhimayaa oo sii dhaafayaa anigoo masaafo fiican u jirsanayaa dhinacooda
Waxaan ka haysanayaa wadada dhinacayga, xawaaraha dhimayaa oo heegan ama diyaar u ahaanayaa inaan istaago
Waxaad u leexan doontaa bidix isgoys kaa horeeya markaad gaartid guriga jaallaha ah. Xaggee gaariga ku aadinaysaa xoogaa ka hor isgoyska?
Dhinaca bidix ee ugu fog ee suurtogal ah
Dhinaca midig ee ugu fog ee suurtogal ah
Maalintee ka mid ah maalmaha asbuuca ayay dhacaan shilalka ugu badan ee taraafiga?
Waditaan noocee ah ayuu ku wadaa gaariga darawal xaaladaan oo kale xilli fiican soo gaabiya xawaaraha si ay u yeeshaan wadashaqayn fiican isaga iyo baaskiil-waduhu?
Salfudud ama fudfudayd
Istarees ama degdeg
Muxuu yahay calaamaddaan waddada macneheedu?
Lama oggola in la dhaafo ama la baaso baabuurta shakhsiga oo kaliya
Lama oggola in la dhaafo ama la baaso dhamaan gaadiidyada ku shaqeeya matoor
Lama oggola in la dhaafo ama la baaso gaadiid matoor ku shaqaynaya oo leh wax ka badan 2 lugood
Waxaad ku waddaa waddo mugdi ah. Xaaladdee ayaan la oggolayn inaad adeegsatid laydhka dheer?
Markaan la kulmo dad lugaynaya
Markaan sii dhaafayo gaadhi meel lagu baakimay (meel la dhigay)
Markaan la kulmo baaskiil wade
Mid ka mid ah noocyada darawaliinta ee soo socda ayaa sida badan lug ku leh shilalka taraafiga si ka badan sida dadka kale. Waa kuma?
Hablaha ama dumarka da'yarta ah ee isku-kalsoonidoodu fiican tahay oo u wada si difaac ah
Ragga da'yarta ah ee isku-kalsoonidoodu liidato oo u wada si weerar ah
Ragga da'yarta ah ee isku-kalsoonidoodu fiican tahay oo u wada si difaac ah